इतिहास कै शक्तिशाली ओली सरकारले देश विकास गर्छ ? ओलीले गरेनन् भने कसैले गर्दै राजेन्द्र महतो भिडियो सहित::Pathivara News
इतिहास कै शक्तिशाली ओली सरकारले देश विकास गर्छ ? ओलीले गरेनन् भने कसैले गर्दै राजेन्द्र महतो भिडियो सहित
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘मधेस आन्दोलनका बेलाको केपी ओली’ जस्तो बन्न नहुने बताएका छन् ।
सांसद महतोले भने- ‘त्योबेला केपी ओलीको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, जसलाई मधेसी जनताले मन पराएका थिएनन् । मधेसको नेता र आन्दोलनकारीको हैसियतले मैले प्रतिकार गर्नुपर्ने, जवाफ दिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो मेरो धर्म थियो र त्यही गरेँ ।’
महतोले अगाडि भने- ‘मधेस आन्दोलनताकाको केपी ओली भएर बस्ने हो भने सरकार असफल हुन्छ । अहिले त ओली देशको प्रधानमन्त्री हो । अहिले न खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिन मिल्छ, न जनतालाई गुमराहमा राख्न मिल्छ ।’
राजपा नेता महतोले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने अध्याय समाप्त भइसकेको बताए । ओली सरकारबारे आफूहरुले ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको उनले स्पष्ट पारे ।
समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ र राजपाको भावी नीतिबारे अनलाइनखबरले महतोसँग गरेको कुराकानीः
कुनैबेला मधेसका नेता राजेन्द्र महतो र पहाडका नेता केपी ओली भनेजस्तो गरिन्थ्यो । अहिले त त्यस्तो सुनिँदैन नि ?
हामीबीचको सम्वन्ध न बिग्रिएको थियो, न सुध्रिएको छ । आफ्नो मुद्दामा म त्यतिबेला पनि थिएँ र अहिले पनि छु ।
त्यतिबेला आन्दोलन थियो । आन्दोलनमा गरम कुरा हुन्छ । चर्को कुरा हुन्छ । नारा त्यहीअनुसार हुने नै भो । किनभने गोली चलाइरहेको हुन्छ, मान्छे मरिरहेका हुन्छन् । राज्य पक्ष दमन गरिरहेको हुन्छ । अनि राज्यपक्षलाई चुनौती दिने, भत्सर्ना गर्ने र प्रतिकार गर्ने काम हुन्छ । सोही अनुसारको अभिव्यक्ति पनि आउँछ ।
त्योबेला केपी ओलीको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, जसलाई मधेसी जनताले मन पराएका थिएनन् । अनि मधेसको नेता र आन्दोलनकारीको हैसियतले मैले प्रतिकार गर्नुपर्ने, जवाफ दिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो मेरो धर्म थियो ।
त्योबेला केपी ओलीको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, जसलाई मधेसी जनताले मन पराएका थिएनन् । अनि मधेसको नेता र आन्दोलनकारीको हैसियतले मैले प्रतिकार गर्नुपर्ने, जवाफ दिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो मेरो धर्म थियो र त्यही गरेँ । अहिले आन्दोलन छैन । त्यो अनुसारको अभिव्यक्ति पनि छैन । त्यो नभएर सम्बन्ध सुध्रियो कि भनेर जिज्ञासा आएको होला ।
सम्बन्ध सुध्रिन पनि सक्छ । र, त्यसका लागि मैले पटक-पटक आग्रह पनि गरिरहेको छु । तपाई देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दुई तिहाइको नेता हुनुहुन्छ । संविधान संशोधन गर्ने हैसियत छ । यत्ति गर्नुभयो भने हामी धन्यवाद दिन्छौं । अन्यथा जनताले पहिलेकै केपी ओली भनेर चित्रण गर्ने अवस्था आउँछ । जनताले त्यही बुझ्छन् ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण मात्र गराएका हौँ । हामीले भन्यौं कि केही आशा र उमंग लिएर तपाईलाई समर्थन गरेका हौं । तपाईले भन्नुभएको थियो र अहिले पनि भनिराख्नुभएको छ । तर, संविधान संशोधनका लागि औचित्य र आवश्यकता कहिले आउने हो ? मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भनेर त हुँदैन ।
सोमवार, साउन २८, २०७५ मा प्रकाशित
सवै अब आ–आफ्नो हिसाबले लड्ने हो भने म पनि सभापति लड्छु’
नेपाली कांग्रेस अझै सुध्रिएन भने साइन बोर्डमा सीमित हुन्छ
कांग्रेसले आकासतिर थुक्दा आफ्नै मुखमा छिटा पर्छ भन्ने कुरा पनि राम्ररी बुझोस्